Ahoana ny fomba hitsaboana fiankinan-doha amin'ny alika | Tontolo alika
Na dia marina aza fa ny fanolorana firaiketam-po sy fiaraha-miasa amin'ny alikantsika dia zavatra mampitombo ny fahasambarany, marina ihany koa izany fiankinan-doha mety hanimba azy izany. Io fihetsika io dia mety hiteraka fihetsika ratsy sy olana toy ny fanahiana manasaraka. Noho izany dia zava-dehibe ny hametrahantsika fetra, hisorohana hatrany ny fanimbana ny fahatsapan'ilay biby.
Matetika ny alika dia mampivelatra io fifamatorana io amin'ilay olona heverin'izy ireo ho lohan'ilay fonosana, izay ahitany fa tsy manana ahiahy izy ireo. Raha tsy misy ny fanatrehany dia mivoatra izy ireo fanjakana tsy fandriam-pahalemana sy hozatra tsy misy zavatra mety amin'ny fifandanjana ara-psikolojika, indraindray mitarika fihetsika manimba. Mba hisorohana an'io, tsy misy tsara noho ny fanarahana torolàlana sasany.
Hanombohana, azontsika atao lavinao ny fidiranao amin'ny faritra sasany avy ao an-trano mba tsy hanenjehana tsy an-kijanona, toy ny trano fidiovana. Amin'izany fomba izany dia hianatra ny hilavo lefona izy ary hihevitra fa tsy afaka mijanona eo akaikintsika foana izy. Izy io dia ho fampiofanana hampiala azy irery any an-trano nefa tsy mitomany na manimba ireo zavatra manodidina azy.
Amin'ny heviny, ny fanahiana fisarahana Iray amin'ny vokatra manelingelina indrindra amin'ny fiankinan-doha resahintsika io. Raha tiana ny hiatrika an'ity toe-javatra ity dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanaovana dia fohy imbetsaka isan'andro isika, miverina afaka minitra vitsivitsy ary mampitombo ny fotoana rehefa mandeha ny andro. Toy izany koa, zava-dehibe ny tsy fiompiana biby na firesahana amin'ilay alika alohan'ny na aorian'ny fiaingantsika, mba hampandeha tsara ny fizotrany. Afaka manampy antsika koa ny famelana ny fahitalavitra na radio.
Zava-dehibe koa ny hanamafisanay ireo baiko fiofanana fototra, satria hanampy ireo biby hahafantatra izay hatao izy ireo, ary amin'izany dia ho tony kokoa izy io. Tsy maintsy miorina ihany koa isika fetra vitsivitsy, toy ny fisorohana azy tsy hihinana ambony latabatra na hibontsina amin'ny alina. Ireo lalàna ireo dia miankina amin'ny fiofanana tadiavintsika ho an'ny alikantsika, ary tsy maintsy hajain'ny fianakaviana iray manontolo.
Tsy hisy izany na iray aza raha tsy manana ilay biby fitiavana, fifehezana ary fanatanjahan-tena ampy. Ny lakile dia ny misafidy ny fotoana mety, izay atolotry ny manam-pahaizana be loatra mba hampiharana ny baikon'ny fanabeazana aorian'ny fampiharana ny alika. Tsy hahatratra na inona na inona izahay raha tsy manarona mialoha ny filanao fototra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fitsaboana ny fiankinan-doha amin'ny alika
Ahoana no amantarana sy fanampiana ny alika mirenireny?